ဝနေတယ်လို့ ခံစားနေရတဲ့ မိန်းကလေးတွေသာ ဒီခံစားချက်ကို နားလည်နိုင်လိမ့်မယ်။ -
ဝနေတယ်လို့ ခံစားနေရတဲ့ မိန်းကလေးတွေသာ ဒီခံစားချက်ကို နားလည်နိုင်လိမ့်မယ်။
ဝလည်း အရေးမကြီးပါဘူး.. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိနေရင် လှတာပဲတဲ့လား? တကယ့်လက်တွေ့မှာ ဒီလောက် မလွယ်ပါဘူး..
ကျွန်မတို့တွေဟာ အလှအပနဲ့ပတ်သက်ရင် တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်းနဲ့ လောဘတက်တတ်ကြပါတယ်။ မိန်းကလေးအများစုရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုက သူ(မ)ရဲ့အလှပေါ်မှာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း မူတည်နေတတ်ပါတယ်လို့ ပြောရင် မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိနေပေမဲ့ ငြင်းရခက်ခက်ပါပဲ။ ကိုယ့်ဆီမှာ လိုအပ်ချက်များတယ်လို့ခံစားရလေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု မှေးမှိန်လာလေဆိုတာက အတော်များများ ကြုံဖူးကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
ကျွန်မလည်း တစ်နှစ်အတွင်းမှာ ၁၀ပေါင်တက်လာပါတယ်။ အကြောင်းအရင်းကတော့ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးပြဿနာတွေကြောင့်ပါ။ အရင်ကတော့ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ပတ်သက်ရင် သိပ်ပြီး မခံစားတတ်ပေမဲ့ အခုအခြေအနေမှာတော့ အရမ်းစိတ်ထိခိုက်လွယ်နေပါတယ်။
ကျွန်မတို့သိထားတာက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိရင် မိန်းကလေးတိုင်းက လှနေတာပဲလို့လေ.. တကယ့်လက်တွေ့ဘဝမှာတော့ အဲဒီယုံကြည်မှုတစ်ခု တည်ဆောက်ဖို့ အရမ်းခက်ခဲနေပါတယ်။ ဘယ်သူသိမှာလဲ။ ပေါင်ချိန်စက်ပေါ်တက်တိုင်း သက်ပြင်းချရတာတွေ၊ တစ်ခုခုစားပြီးမှ တနုံ့နုံ့နောင်တရနေတာတွေ၊ မှန်ထဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကြည့်တိုင်း စိတ်အလိုမကျဖြစ်တာတွေပေါ့။
Related Article >>> ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာ ပိန်သွယ်နေမှလား? ကိတ်နေမှလား?
ဝမှလှတယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ ကျန်းမာတဲ့ မမဝဝတွေအတွက်ပါပဲ။ ဒါတောင်မှ အနာဂတ်မှာ ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာ ဘယ်သူမှမသိနိုင်သေးဘူးလေ။ ကျွန်မ ဆရာဝန်တွေနဲ့ တွေ့ခဲ့တုန်းက နားလည်လာတာကတော့ ကိုယ်အလေးချိန်မှန်နေခြင်းဟာ လူတစ်ယောက်ကို စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကျန်းမာစေဖို့ အထောက်အကူပြုတယ် ဆိုတာပါပဲ။
ကျန်းမာအောင် နေရမယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဖြေရှာတိုင်း ထွက်လာတာကတော့ ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချရမယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဂျင် (gym) ဆော့တယ်။ နှစ်လလောက်နေလည်း မထူးခြားလာတော့ အဖြေတွေ ထပ်ရှာရပြန်တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ Diet (အစာချင့်ချိန်စားခြင်း)က နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်လာတယ်။
အစားအသောက်ခုံမင်သူတစ်ဦးအတွက် diet လုပ်ဖို့က စဉ်းစားလေ စိတ်ပျက်လေပါပဲ။ ဒါပေမဲ့လည်း ကြိုးစားရမှာပါပဲ။ အဝတ်ဘီရိုထဲ “ပိန်မှဝတ်မယ်”ဆိုတဲ့ အင်္ကျီတွေ အပုံလိုက်ပွနေတာကို မကြည့်ချင်တော့လို့။ ရှော့ပင်းထွက်တိုင်း ကိုယ့်ဆိုဒ်ရှာမရတာတွေကို စိတ်ပျက်ရတာ ပင်ပန်းလာလို့။ ကိုယ့်ကိုအစ်မ၊ အစ်မလို့ မှားခေါ်နေတဲ့ ဦးလေးကြီးအရွယ်တွေကိုမြင်ရင် ဒေါသထွက်လို့။ ဒီလို လို့ ပေါင်းများစွာက တွန်းအားပေါ့။
Related Article >>> အလှအပကို စည်းမကြပ်ရ
ဘဝတူ မမဝဝလေးတွေ ဒီစာကို ဖတ်မိတယ်ဆိုရင် နားလည်ပေးကြမှာ သေချာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ပိုအားငယ်သွားအောင်လုပ်ဖို့ ဒီစာကို ရေးဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဝလာတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး “ငါတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါလား”လို့ခံစားမိစေဖို့၊ ဝရင်တောင် ကျန်းမာတဲ့မမဝဝဖြစ်အောင် ကြိုးစားဖို့၊ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က မမဝဝတွေ စိတ်ဓာတ်ကျနေရင် စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေးဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ဖွင့်ဟလိုက်တာပါ။ ဝလည်းလှတယ်ဆိုပေမဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညီညွတ်ညွတ် ပြည့်အောင် ကြိုးစားကြတာကသာ မှန်မယ်ထင်ပါတယ် ယောင်းတို့ရေ… စာရေးသူလည်း ကြိုးစားနေပါတယ်။ တို့တွေ တူတူ ကြိုးစားကြရအောင်လေ…
ဝလညျး အရေးမကွီးပါဘူး.. ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှုရှိနရေငျ လှတာပဲတဲ့လား? တကယျ့လကျတှမှေ့ာ ဒီလောကျ မလှယျပါဘူး..
ကြှနျမတို့တှဟော အလှအပနဲ့ပတျသကျရငျ တဈနညျးမဟုတျ တဈနညျးနဲ့ လောဘတကျတတျကွပါတယျ။ မိနျးကလေးအမြားစုရဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှုက သူ(မ)ရဲ့အလှပျေါမှာ တဈစိတျတဈပိုငျး မူတညျနတေတျပါတယျလို့ ပွောရငျ မဟုတျဘူးဆိုတာ သိနပေမေဲ့ ငွငျးရခကျခကျပါပဲ။ ကိုယျ့ဆီမှာ လိုအပျခကျြမြားတယျလို့ခံစားရလေ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှု မှေးမှိနျလာလဆေိုတာက အတျောမြားမြား ကွုံဖူးကွလိမျ့မယျထငျပါတယျ။
ကြှနျမလညျး တဈနှဈအတှငျးမှာ ၁၀ပေါငျတကျလာပါတယျ။ အကွောငျးအရငျးကတော့ ကနျြးမာရေး၊ လူမှုရေးပွဿနာတှကွေောငျ့ပါ။ အရငျကတော့ ကိုယျ့ခန်ဓာကိုယျနဲ့ ပတျသကျရငျ သိပျပွီး မခံစားတတျပမေဲ့ အခုအခွအေနမှောတော့ အရမျးစိတျထိခိုကျလှယျနပေါတယျ။
ကြှနျမတို့သိထားတာက ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှုရှိရငျ မိနျးကလေးတိုငျးက လှနတောပဲလို့လေ.. တကယျ့လကျတှဘေ့ဝမှာတော့ အဲဒီယုံကွညျမှုတဈခု တညျဆောကျဖို့ အရမျးခကျခဲနပေါတယျ။ ဘယျသူသိမှာလဲ။ ပေါငျခြိနျစကျပျေါတကျတိုငျး သကျပွငျးခရြတာတှေ၊ တဈခုခုစားပွီးမှ တနုံ့နုံ့နောငျတရနတောတှေ၊ မှနျထဲ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျကွညျ့တိုငျး စိတျအလိုမကဖြွဈတာတှပေေါ့။
Related Article >>> ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ ခန်ဓာကိုယျဆိုတာ ပိနျသှယျနမှေလား? ကိတျနမှေလား?
ဝမှလှတယျဆိုတာ တကယျတော့ ကနျြးမာတဲ့ မမဝဝတှအေတှကျပါပဲ။ ဒါတောငျမှ အနာဂတျမှာ ဘယျလိုဖွဈလာမလဲဆိုတာ ဘယျသူမှမသိနိုငျသေးဘူးလေ။ ကြှနျမ ဆရာဝနျတှနေဲ့ တှခေဲ့တုနျးက နားလညျလာတာကတော့ ကိုယျအလေးခြိနျမှနျနခွေငျးဟာ လူတဈယောကျကို စိတျရောကိုယျပါ ကနျြးမာစဖေို့ အထောကျအကူပွုတယျ ဆိုတာပါပဲ။
ကနျြးမာအောငျ နရေမယျဆိုတာနဲ့ ပတျသကျပွီး အဖွရှောတိုငျး ထှကျလာတာကတော့ ကိုယျအလေးခြိနျ လြှော့ခရြမယျဆိုတာပါပဲ။ ဂငျြ (gym) ဆော့တယျ။ နှဈလလောကျနလေညျး မထူးခွားလာတော့ အဖွတှေေ ထပျရှာရပွနျတယျ။ နောကျဆုံးတော့ Diet (အစာခငျြ့ခြိနျစားခွငျး)က နောကျဆုံးမြှျောလငျ့ခကျြဖွဈလာတယျ။
အစားအသောကျခုံမငျသူတဈဦးအတှကျ diet လုပျဖို့က စဉျးစားလေ စိတျပကျြလပေါပဲ။ ဒါပမေဲ့လညျး ကွိုးစားရမှာပါပဲ။ အဝတျဘီရိုထဲ “ပိနျမှဝတျမယျ”ဆိုတဲ့ အင်ျကြီတှေ အပုံလိုကျပှနတောကို မကွညျ့ခငျြတော့လို့။ ရှော့ပငျးထှကျတိုငျး ကိုယျ့ဆိုဒျရှာမရတာတှကေို စိတျပကျြရတာ ပငျပနျးလာလို့။ ကိုယျ့ကိုအဈမ၊ အဈမလို့ မှားချေါနတေဲ့ ဦးလေးကွီးအရှယျတှကေိုမွငျရငျ ဒေါသထှကျလို့။ ဒီလို လို့ ပေါငျးမြားစှာက တှနျးအားပေါ့။
Related Article >>> အလှအပကို စညျးမကွပျရ
ဘဝတူ မမဝဝလေးတှေ ဒီစာကို ဖတျမိတယျဆိုရငျ နားလညျပေးကွမှာ သခြောပါတယျ။ ဒါပမေဲ့လညျး ပိုအားငယျသှားအောငျလုပျဖို့ ဒီစာကို ရေးဖွဈတာမဟုတျပါဘူး။ ဝလာတာနဲ့ ပတျသကျပွီး “ငါတဈယောကျတညျးမဟုတျပါလား”လို့ခံစားမိစဖေို့၊ ဝရငျတောငျ ကနျြးမာတဲ့မမဝဝဖွဈအောငျ ကွိုးစားဖို့၊ ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြက မမဝဝတှေ စိတျဓာတျကနြရေငျ စိတျဓာတျခှနျအားပေးဖို့ ရညျရှယျပွီး ဖှငျ့ဟလိုကျတာပါ။ ဝလညျးလှတယျဆိုပမေဲ့ ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညီညှတျညှတျ ပွညျ့အောငျ ကွိုးစားကွတာကသာ မှနျမယျထငျပါတယျ ယောငျးတို့ရေ… စာရေးသူလညျး ကွိုးစားနပေါတယျ။ တို့တှေ တူတူ ကွိုးစားကွရအောငျလေ…
Tagged Chubby, diet, Fat, Feelings, Letters from Heart, life
FUN Letters From the Heart
Posted on March 12, 2018 Author Wai Zin
Posted on January 4, 2018 Author Myat Moe
ကိုယ်လိုချင်သမျှကို ကိုယ့်ရည်းစားက ဝယ်ပေးသင့်တယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆက တကယ်ရော တရားရဲ့လား။
ခရီးသွား အေဂျင်စီနဲ့ ခရီးသွားတော့မယ်ဆိုရင် ဒီလို အချက်လေးတွေတော့ သိထားဖို့ လိုမယ်ထင်